के छ टीकापुर घटनाको ‘गोप्य’ जाँचबुझ प्रतिवेदनमा? – Tharuwan.com
के छ टीकापुर घटनाको ‘गोप्य’ जाँचबुझ प्रतिवेदनमा?
संविधान जारी हुनुपूर्व कैलालीको टीकापुरमा ८ जनाकाे ज्यान जानेगरी घटना घटेकाे बिहीबार तीन वर्ष पुरा भएकाे छ। एक बालक तथा सात प्रहरीको मृत्यु भएको सो घटनाको बारेमा तत्कालिन समयमा सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍यो। तर, प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।
सरकारले आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई कारबाही त गरेको छैन नै साथै सुरक्षा सम्यन्त्रमा देखिएकाे कमजोरी सुधार्न समेत सकेको छैन। प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वायन नहुँदा आयोगका तत्कालिन अधिकारीहरु समेत असन्तुष्ट छन्।
आयोगले कैलालीको टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी नभएको ठहर गरेको छ। प्रतिवेदनमा चौधरीलाई टीकापुर घटनाको पीडितका रुपमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रहरीले चौधरीलाई टीकापुरमा ७ प्रहरी र एक बालक हत्या घटनाको प्रमुख योजनाकारका रुपमा मुद्दा दायर गरेकोमा उनी अदालतमा उपस्थित भई हाल पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन्।
स्थानीय र सरोकारवालासँगको कुराकानीका आधारमा जाँचबुझ आयोगले चौधरी घटनाको पीडित भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। प्रहरीमाथि आक्रमणको घटना पूर्वयोजना अनुरुप नै भएको तर रेशम चौधरीले नभई अरु कसैले बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘उनले त अघिल्लो दिन नै आन्दोलनमा हिंसात्मक गतिविधि हुन सक्ने भनेर सुरक्षा निकायलाई जानकारी दिएर सहयोग गरेको देखियो,’ आयोगका एक सदस्यले भने, ‘त्यो दिनको आन्दोलनमा पनि उनी संलग्न भएको देखिएन।’ प्रहरी अनुसन्धानले भने चौधरीलाई नै मुख्य दोषी ठहर्‍याएको छ।
चौधरीलाई सरकारले यसअघि नै क्षतिपूर्ति बापत १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ दिइसकेको छ।
स्थानीयहरुसँगको कुराकानीमा भने प्रहरीले गहन अनुसन्धान नगरी हुलमूलका आधारमा पक्राउ गरिएको गुनासो गरेका छन्। केही निर्दाेष व्यक्ति फसेको र घटनाका दोषीहरु भने अनुसन्धान बाहिर रहेको स्थानीयको गुनासो छ। घटनामा पक्राउ परेका २६ जना अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
जाँचबुझ आयोगले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सिडिओलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। कसैको नाम नतोकी आयोगले घटनाको पछाडि स्थानीय प्रशासनको कमजोरी औल्याउँदै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।
टीकापुर घटनाबारे पूर्वसूचना नहुनु, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच समन्वय नहुनु र घटनापछिको उचित विश्लेषण प्रशासनले गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उचित विश्लेषण गरेर सुरक्षा रणनीति बनाएको भए प्रहरी मारिएपछिको अवस्थामा स्थानीयको सम्पत्तीमा तोडफोड र आगजनीको घटना हुन नपाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। टीकापुर घटनापछि प्रहरीले धेरै बल प्रयोग गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सुरक्षा नियकासँग दंगा नियन्त्रण सम्बन्धी स्रोत–साधन नहुनु पनि टीकापुर घटनामा ठूलो क्षतिको कारण मानिएको छ। टीकापुर घटनामा लाठी र ढालको आधारमा प्रहरीले हातहतियारसहितका आन्दोलनकारीसँग भिड्नुपरेको थियो। जसकारण प्रहरीले भिड नियन्त्रण गर्न नसकी क्षति नै भाेग्नुपरेको थियो। एसएसपी लगायतलाई आन्दोलनकारीले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेका थिए। भीड नियन्त्रण सम्बन्धी तालिम र स्रोतसाधन दुवैमा प्रहरीलाई बलियो बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
आयोगले टीकापुर मात्र नभई मधेसका अन्य आन्दोलनमा भएका हत्या, हिंसा, आगजनी तथा तोडफोडका घटनाको समेत छानबिन गर्ने म्यान्डेट पाएको थियो। आयोगले तराई, मधेस तथा थरुहट क्षेत्रमा त्यस्ता आन्दोलन पछि पनि हुनसक्ने भएकाले स्थायी समाधान खोज्न सुझाव दिएको छ। अझै पनि संविधानप्रति असन्तुष्टिहरु रहेकाले त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ अघि बढ्न आयोगको सुझाव छ।
सर्वाेच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठिन जाँचबुझ आयोगमा सुरुमा ७ जना सदस्य थिए। आयोगका सदस्य खुशीप्रसाद थारु उच्च अदालतको न्यायधीशमा नियुक्त भएपछि आयोग ६ जनामा सीमित भएको थियो। स्थलगत अवलोकन, उजुरी तथा सरोकारवाला पक्षहरुसँगको छलफलपछि आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
आयोगमा नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त एआइजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अवकाशप्राप्त डिआइजी सुखचन्द्र झा, पूर्व नायब महान्यायधिवक्ता सूर्य कोइराला र कानुन व्यवसायी सुरज लोप्चन सदस्य थिए। गृह मन्त्रालयका शान्ति सुुरक्षा महाशाखाका सहसचिवले आयोगको सदस्यसचिवका रुपमा काम गरेका थिए। आयोगले ७ सय पेजको प्रतिवेदन तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको थियो।
प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा आयोगका पदाधिकारीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। ‘तर अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा दुःख लागेको छ,’ आयोगका एक सदस्य भन्छन्, ‘प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वायन नहुँदा हाम्रो मेहनत खेर गएको छ।’
तीन वर्षपछि मात्रै अदालतमा पहिलो सुनुवाइ
आरोपितहरु कैलालीका निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीसहित २६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियाे।
तर, घटना भएकाे तीन वर्षको अवधिमा जिल्ला अदालत कैलालीले टीकापुर घटनामा बुधबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै साक्षी झिकाउने आदेश दिएको छ। हत्याकाण्ड भएको ३ वर्षपछि सुनुवाइ सुरु भएको मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश परशुुराम भट्टराईको इजलासले पक्ष र विपक्ष दुवैलाई उक्त घटनाका साक्षीलाई अदालत पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो। अदालतले भदौ २४ गते वादी–प्रतिवादीलाई साक्षीसहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।
‘अदालतले भदौ २४ गते वादी/प्रतिवादीलाई घटनाको बारेमा जे प्रमाण छ त्यही ल्याएर अदालतमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ,’ अदालतका श्रेस्तेदार इन्द्रबहादुर कठायतले भने, ‘त्यसपछि टीकापुर घटनाको मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ हुन्छ।’
काठमाडौं थुनामा रहेका रेशम चौधरीको मुद्दा भने सर्वोच्च अदालतमा समेत रहेकाे छ। जिल्ला अदाललतमा आत्मसर्मपण गरेपछि थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध उनी सर्वोच्च आएका थिए। सर्वोच्चले उनको मुद्दामा जिल्ला अदालतको फाइल मगाउने आदेश गरेको छ।
प्रतिनिधिसभामा विजयी चौधरीसहित २६ जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र चोरीडकैती मुद्दा चलाइएको छ। उनीहरु पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन्।
थारुहरुले नागरिकता फिर्ता अभियान चलाउनुपर्छ : सुरेन्द्र चौधरी
थाकस अध्यक्ष धनिराम चौधरीले यसरी सम्झिए भदौ ७